Wati wamboda here kuronga peji kana kutumira muWordPress uye wakanetsekana nekusagona kutsvaga nekuwana iyo posvo? Zvakadii nekungokwanisa kuwedzera posvo nyowani nyore? Zvakadii nekungokwanisa chete kuwana peji rekupinda zviri nyore? DK New Mediaanovandudza anotyisa, Stephen Coley, apedzisira apa mhinduro yekuti wese mushandisi weWordPress achada… Teleport. Teleport yakaipa yakaipa menyu diki yako
Kana iwe wanga uchiverenga bhurogu yangu kwenguva refu, iwe unozoziva kuti maonero angu aChaCha anga aine kusimuka nekudzika. ChaCha ikozvino mutengi (pane kuziviswa kwangu) saka ndanga ndichitarisa zvakadzama… uye zviri kutaridzika zvakanaka. Usatore izwi rangu nezvazvo! Iyo yose tech nharaunda, kusanganisira vepakati paTechCrunch (vakomana vanofarira kuvenga ChaCha) uye Mashable (echo… echo…) vanga vasingaone chokwadi chekuti, mu
China, April 10, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ini (nevamwe) handina kumbonzwisisa ChaCha. ChaCha igamba rekumusha muIndipolis uye awana toni yemari kumashure kwayo. Ndakanga ndisinganzwisisi kuti sei munhu achizokanda mari pane injini yekutsvaga inofambiswa nevanhu. Ini ndaifunga kuti yaive yakawandisa zviwanikwa uye kutambisa nguva ... yakatemerwa kune dot com kufa. Ndakakanganisa. ChaCha akaita chinhu chakandishamisa. Vaiziva zvavaigona - kutsvaga chaiko
Chishanu, July 6, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ichi chakakosha! Stephen ishamwari yakanaka yemwanakomana wangu, Bill. Stefano murume mukuru - akangwara kwazvo, anoda kuziva, uye anoshivirira zvisingaite. Ndinoziva paanondibvunza mubvunzo iye angangodaro anga akamuka husiku hwekurara saka ndinonakidzwa nekumubatsira kunze. Stefano's blog inofanirwa kunakidza pamusoro pegore rinotevera apo iye achienda kuGerman. Germany inonyatso kuzivikanwa nekushaikwa kwayo kwema blogger.